SEO Buddy: Ntọala SEO gị na-eduzi na ịba ụba Nhazi Ọdịdị Gị | Martech Zone
The SEO Nyocha site na SEO Buddy is ụzọ gị gaa ọrụ SEO ọ bụla dị mkpa Ikwesiri iwere iji bulie weebụsaịtị gi ma nweta ahia ahia. Nke a bụ ngwungwu zuru oke, n'adịghị ka ihe ọ bụla m hụla n'ịntanetị, na-enyere aka na azụmaahịa na-enyere aka nyere ha aka ịkwalite saịtị ha ma bulie ọhụụ ha na ọchụchọ.
The SEO Checklist Gụnyere
Mpempe akwụkwọ 102-Point SEO Mpempe akwụkwọ Google
Ihe ntinye ederede 102-Point SEO
Ebook 62 Page (PDF)
Usoro kalenda ịhazi ọdịnaya izu 52 (PDF)
Ihe nyocha 50 nke ntinye nkesa (akwukwo Google)
N'ime usoro arụmọrụ 40 (SOPs) ka ị soro.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụrụ na SEO na mgba, na SEO Nyocha ga - enyere gị aka ịghọta nnukwu foto nke ihe ịkwesịrị ịme iji bulie ma debe saịtị. Iji ngwa na akwụkwọ ntanetị, ị ga-enwe ike ịgbaso ihe ị nwere ma ịmebeghị ka ị ghara ileghara usoro ọ bụla dị mkpa anya.
Ọ bụghị naanị ndepụta nke isi ihe, ma. Ndepụta ahụ na-abịa na akwụkwọ nkọwa zuru ezu, nke usoro iji wee ghọta nke ọma otu esi arụ usoro ọ bụla.
Nke a abụghị oge ịzụta, otu! SEO na - agbanwe agbanwe mgbe niile mgbe ịzụrụ ya SEO Nyocha, ị ga-enweta ohere ndụ gụnyere mmelite niile ga - eme n'ọdịnihu n'efu.
Y’oburu na ichoro SEO, nke a bu oke egwu. Ihe m huru n'anya banyere ya bu ihe doro anya ị nwetara. Ọ dịka ịnwa ịme egwuregwu jigsaw na ịhụ foto ahụ na nke mbụ ya. Know maara ihe ọ dị mkpa ka eme.
Louise Green, Onye debanyere aha
Mpaghara nlele SEO
Dika engines choputara, enwere uzo di iche iche i gha aghaghi ilekwasi anya ma oburu na ichoro ime ka ahia ahia gi ma obu ebe ahia gi:
Foundation - Otu esi ahazi nyocha, soro gi okwu, ma soro uzo di na Google Search Console.
Ahụmahụ onye ọrụ - Google na-eche banyere ahụmịhe onye ọrụ njin ọchụchọ nwere mgbe ha rutere na saịtị gị, yabụ ị ga-emerịrị ahụmịhe ahụ.
content - Mgbe ị mepụtara ọdịnaya pụrụ iche, ndị mmadụ ga-ekekọrịta ya, saịtị dị mma ga-ejikọ ya, Google ga-ebikwa gị maka ya.
Performance - Mụta otu esi eme ka saịtị gị dị ọsọ ọsọ ka ihe niile na-ebu ngwa ngwa. Google hụrụ weebụsaịtị ngwa ngwa.
Na peeji nke SEO - Peeji ọ bụla na saịtị gị ga-adịrịrị mfe njin nchọgharị na-iri ari iji gosipụta nke ọma yana nke ndị ọbịa ga-agagharị na ya.
Wepu-peeji SEO - Mepụta mmata maka weebụsaịtị gị ma kpokọta njikọ dị oke ọnụ site na ịgafe na mgbasa ozi mmekọrịta iji mee ka ikike gị nwee ikike.
Nka na ụzụ SEO - Zere ọnyà ndị ahụ na - egbochi engines ọchụchọ ịchọpụta na ịkọwapụta saịtị gị nke ọma.
SEO mpaghara - Na-ebuli ndepụta nke mpaghara gị na injin nchọta yana isi akwụkwọ ndekọ aha ebe igwe na - achọpụta ihe ozi gị na ebe ndị ọrụ ha hụrụ gị.
Nke a abụghị usoro ịntanetị! Nchịkọta SEO bụ ụzọ na ndenye ego maka ịga nke ọma SEO na ọdịnaya niile ịchọrọ iji nweta nsonaazụ SEO kacha elu!
Jiri koodu ego MARTECHZONE
Ọ bụrụ na ịchọrọ 25% kwụsịrị ụgwọ nke SEO Checklist, jiri koodu MARTECHZONE mgbe ị na-ndenye ọpụpụ! Ga-enweta ụfọdụ agbakwunye na ndenye ọpụpụ.
Zụta SEO Lelee site na SEO Buddy
Ngosipụta: Abụ m mmekọ maka SEO enyi.
Tags: koodu egoakwukwo ozi googleobodo seogbanyụọ-saịtị seona saịtị ahụ seonhazi ọchụchọndị ọrụ njin ọchụchọọchụchọ njirimaraseo enyiseo ndenye egoseo nhazi atụmatụakwụkwọ ndekọ ahandu nduseo atụmatụseo ọzụzụteknụzụ seo
PHP na SQL: Gbakọọ ma ọ bụ Ajụjụ Nnukwu Ebe Dị Anya N'etiti Ihe Osimiri na Longitude na Haversine Formula